MAXAA KULMIYEY KADEEDKII DARISKA IYO KACDOONKA XILDHIBAANADA? | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Siyaasada MAXAA KULMIYEY KADEEDKII DARISKA IYO KACDOONKA XILDHIBAANADA?
MAXAA KULMIYEY KADEEDKII DARISKA IYO KACDOONKA XILDHIBAANADA?
Intaa kabacdi, Mudadii burburka ee 23-Sano iyo dheeraadka aheyd dalkeena hooyo ee Soomaaliya wuxuu noqdey Qubrustii Jawaasiista. Marka laga soo tago sirdoonka heerarka hoose ah ee dalalka dariska ah dalka uga buuxa ee ay kusoo gurayeen dalka mudadaa aadka u dheer ee inta lasoo baro af-Soomaalida iyo abtirsiimaha qaba’illada Soomaaliyeed kadibna loo kala diro gobollada dalka ayaa qaarka loo diro gobollada waqooyina waxaa lagu yiraadaa sheegta qabaa’llada gobollada koonfureed, halka kuwa loo diro gobollada Koonfureedna lagu yiraahdo sheegta qabaa’illada Gobollada waqooyi. Waxeey wada guursadeen gabdho Soomaaliyeed, oo ilmihii eey gudaha dalka ugu dhaleen ayaa manta wada qaanqaar ah. Waa kuwa mustaqbalka fog Dalalka dariska eey ku tashanayaan in eey inta goloyaasha dowlada soo wada galaan, la wareegaan hogaanka dalka, iyo masiirka dhan ee ummada Soomaaliyeed. Balse taa inta aan la gaarin ayaa waxaa hadaba hubaal ah in eey ushaqeeyaan kuwo maqaarka sare Soomaali ka ah oo ku kala jira golayaasha dowlada ugu sareeya, oo xafiiskastaahiba jooga, kuwaasoo uga mas’uulka cadowga Soomaaliyeed fulinta qorshe kastaa ee loo baahdo, iyo waqtikasta ee loo baahdo kuwaasoo lagula dagaallamay rajada qarannimo ee ummada Soomaaliyeed.
Bal u fiirso dhacdooyinkan, adigoo indhaha u furaya sida dhacdooyinka isu fasirayaan. Sida la wada ogsoonyahay Kenya waxeey tiro lagu qiyaasey 5000 oo qof oo masaakiin Soomaaliyeed ah, una badnaa dumar iyo caruur raaf, silic iyo bahdi raaxada uga qaadey Xaafada Islii iyo Nairobi, oo eey ku jiraan in badan oo Card-ka iyo warqadaha UNHCR ee qaxootiga heeysta. Jirdil, Kufsi, Dhac iyo Boob ayaa usii dheeraa wixii loogu geeysanayey garoonkii lagu karantiiley, oo lala barbardhigey Concentration Camps-kii Hitler uu yahooda ku heynjirey. Waxaa ka dhiidhiyey Golahada Waziirada iyo Gobolaha Baarlamaanka labadaba, inkastoo Soomaalida qaar meelkastaba ha joogtee aaney jecleyn in wanaagaa eey dowladooda u qiraan, sababo kala duwan aawadeed.
Intaa kuma aaneey ekaane, Kenya’e waxeey xirtey Qunsulkii dhamaa ee Safaraada Soomaliyeed ee Kenya sida rasmiga ah ugu fadhiyey.Taasoo ah wax aan la arag oo aan la maqal. Sida caadada diplomaasiyadeed tahay (Diplomatic Custom) Marka dowladuhu muujinayaan in xiriirka labadan wadan uu xumaadey, waxeey dalkooda ka eryaan Safiirka dalkaas, koodana weey u yeertaan, xiridse waa wax aan ka mid aheyn dhaqanka diplomasiyadeed, oo qofkaa diplomatic-ga ah ee dalkiisa sida rasmiga ah u matalaya wuxuu leeyahay wax afka qalaad lagu yitaahdo “Diplomatic Immunity*”.Hoos ka eeg. kadib markii taasi dhacdey, waxaa si public ah uga kala dhiidhiyey Madaxweynaha dalka, Golahada Waziirada iyo Gobolaha Baarlamaanka intaba, inkastoo soomaalid qaar meelkastaba ha joogtee aaney jecleyn in wanaagaa eey dowladooda u qiraan, sababo kala duwan aawadeed.
Kenya oo aan u baran dowlad Soomaaliyeed oo damiir, dadnimo iyo dhiiranaan intaa la eg inta iska baarta, ficilladeeda si public ah u radisa ama uga jawaabta, ayaa waxeey kaga jawaabtey iyana in eey si toos oo waliba rasmi ah markii ugu horeeysey eey “Qunsul” usoo dirato Kismaayo, oo ah xarunta maamul-ka kumeelgaar ka ah kaa oo eey xoogga ku heeystaan Maleeshiyo-Beeleedka eey iyadu soo carbisatey/soo tababaratey ee Raaskambooni, kaasoo badaley maamulkii asalka ahaa ee Azania, kuwaasoo meesha eey ku heeyso hadda, ugana mas’uulka ah maamulkaa xeyndaabka u ah (Buffer zone) Dalka iyo danaha Kenya. Waxeey Kenya Qunsul ku sheegaa magaaladaa Kismaayo ee ka midka ah dalka Soomaaliya usoo direeysaa iyadoo aaneey soo ogeysiin dowladii rasmiga aheyd ee dalka Soomaaliya mas’uulka ka aheyd caalamiyan.
Waxeeyse ugu akhassaneyd markii la yiri waxaa si damiir la’aan ah waraaqihii Qunsulkaa kenya ka gudoomey hogaamiyihii Jabhad Beeleed-ka Raaskambooni ee madiidanka u ahaa kenya, hogaamiye kooxeed: Axmed Madoobe!
Maadaama Wadamada Dariska ee dhulka iyo dadkaba ka heeysta qaran weynaha Soomaaliyeed eey umidoobeen cadowtinimada Soomaaliya, markastana siyaasadooda ku wajahan Soomaaliya eey isku dubaridaan, ayaa dhinaca kalana Ethiopia waxeey shirkii ammaanka “Dalalka” Africa oo eey ka qeyb galayeen “Madaxweynayaasha Dalalka”” qaarada Africa, ee ka furmey April 25,2014 magaalada Bahar-Dar ee dalka Ethiopia ayaa meeshii eey ku cuumi laheyd Madaxweynaha Dalka Soomaaliya: H.E. Xassan Sh. Maxamuud, waxeey booskiisii ku casuuntey Chief-minster-ka gobollada Bari, ama Madaxa Maamul-Beeleedka Puntland: Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo isagu sidaa la dhacsan, jeclaan lahaa in maamulka uu madaxda ka yahay lagala tashada wixiiba Soomaaliya ku saabsan, waxaa sidoo kale la socdey wafdi isla Maamulkaa ah oo si toos ah Garowe uga baxay.Taasoo aheyd xagaldaacin toos ah oo aan qarsooneyn,laguna niyadjabinayey dadka iyo dowlada Soomaaliyeed. Foowdadaa waxaa sii waaley garasho la’aanta qollada maamusha website-ka dowlada (radiomuqdisho.net) oo qaab indho-sarcaad ah website-kii Dowlada dhexe kusoo qaatey.halkan ka eeg: http://radiyomuqdisho.so/wafdigii-madaxweynaha-dawladda-puntland-oo-heer-sare-loogu-soo-dhaweeyey-magaalada-bahir-dar-war-saxaafadeedsawirro/
Dowladu waxeey u dirtey warqado cabasho ah dowladahaas, tan ku saabsan Kenya kor ayey u sheegtey, tan kalase waa la qariyey, balse safar ayaa loogu yeerey Adisababa oo laga wada hadley.
Maadaama siyaasadaha fog ee dowladaha dariska gaar ahaan Ethiopia iyo Kenya eey ka leeyihiin Soomaaliya eey tahay mid hore u dagsan oo aragti fog leh, ayaa si duruus loogu dhigo dowlada hadda jirtaahi, loona tuso in aaneey awoodeedu gaarsiisneyn in eey wax ka dhiidhiiso,mardambana aaney wadaxaba kor u qaadin ayaa waxaa isla markiiba lagu abaabuley “Xildhibaannada” jawaasiista u ah wadamada dariska kuna dhex qarsoon gudaha Baarlamaaka Sooamaliya kuwaasoo u dhexfadhiya danaha Dowladahaasi, iyo waliba kuwa Maamul-Beeledyada aan qaarkood kor kusoo xusney kuwaasoo ulajeedooyinkii hore loogu abuureyba aheyd in Soomaaliya lagu kala dhantaalo, abidna aan loo arag Soomaaliya oo ah dal mideeysan, lehna dowlad dhexe oo awood leh, taasoo caalamka u matali karta danahooda mideeya ee Qaran. Xildhibaannadan hadda wada mooshinka lagu doonayo in madaxweynaha dalka lagu rido ama uu is ku casilo ayaa waxaa hormoodaya: Xildhibaan Jurilla, Xildhibaan Xasan Abshir Faarax, Xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf, Xildhibaan Prof. Gaandi, Xildhibaan prof. Cali Khaliif Galeyr…. “Nimankan waxey sidoo kale u danleeyihiin una gulfinayaan qorshaha ah: “Midkaan Booska ka riixa, oo midkiina keensada”, marka lagu daro kuwa aan kor kusoo xusney, waa hadii sidaa eey u helayaane.
Soomaalida meesha dhow wax ka aragtase, waxeey u arkaan oo kaliya in ujeedada riditaanka Madaxweyne Xasan Shiekh Maxamuud uusan ku saleysneen wax mabda’ ah, iyo mid Soomaalinimo ku dheehantahy, ama Xasan wax buu qabtay ama wax ma qaban lagu leeyahay, balse arintu tahay oo kaliya maqaayadii baa qoryo beeshay oo dhaqaale baa la abuurayaa, sida caadaduba aheyd markii mudo la joogaba. Micnaha qorshuhu hunguri ma dhaafsiisna oo waa kan la riixayo iyo kooxdiisaba Lacag ka qaata, kan la doonayo in la keeno iyo kooxdiisana sidoo kale lacag ka qaata. Marka waa Hal dhagax Labo shimbirood kuwada dil, oo lamid ah Hal Mooshin Labada Jeeb Dollar hakuu wada buuxiyeen. Xildhibaannada kooxdan horkacaya waxaa ka mid ah: Xildhibaan Cabdulqaadir Cosoble, Xildhibaan Cabdullahi Jaamac ‘Kabaweyne’ iyo Xildhibaan Maxamuud Guure.
Dalalka dariska Soomaaliya maadaama taariikh mugdi ah eey ka dhaxeeyso, dad iyo deegaan in eey ka heeystaanan eey ogyihiin, ayey aad u daraaseeyeeyn. Waxeey ka dharagsanyihiin wixii ummada kaal gaarey iyo in boogta Soomaalidu tahay qabyaalad, oo qofka Soomaaliga ahi marka laga reebo in yaroo fara kutiris ahi, aragtidooda aaneey dhaafsiisneyn tan qabiilka, oo tan qaran inta eey u tirsantahayba eey aad u yartahay. Sidaa daraadeed markasta waxa eey waxkasta usoomaraan caadiyada qabiil taasoo ummadeena intooda ugu badan indha tirta, xilmaansiisana cadowgooda rasmiga ah.
Aqristoow meel fog fiiriye, Orgiga Oohinta ka weeyne, bal maxaa dhacdooyinkaa isku soo wada beegey oo maxaa kulmiyey kadeedkii wadamada dariska iyo kacdoonkan xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya?-Allahuma Ballaqtu.
Previous articleMadaxweyne Xassan Sheekh waxaan diyaar u ahay in la hadlo Qof walba oo wax tabanaya
Next articleMadaxweyne Xassan oo si ka duwan sidii hore Xamar loogu soo Dhaweeyay